Ku Bilowga Ololahaaga Suuqgeynta Video-ga 3 Siyaabood | Martech Zone
Waxaad u badan tahay inaad ka maqashay geed canab in fiidiyowyadu ay yihiin maalgashi qiimo leh ganacsi kasta oo doonaya inuu hagaajiyo joogitaankooda internetka. Muuqaaladani waxay ku fiican yihiin kordhinta qiimaha beddelaadda maxaa yeelay waxay ku fiican yihiin ka qayb qaadashada dhagaystayaasha iyo gudbinta farriimaha isku dhafan si wax ku ool ah - waa maxay jacaylka?
Marka, waxaad la yaaban tahay sidee baad u bilaabi kartaa ololahaaga suuqgeynta fiidiyowga? Ololaha suuqgeynta fiidiyowga wuxuu umuuqan karaa mashruuc aad u weyn oo ma ogid waxa ugu horeeya ee la qaadayo. Ha murugoon, waxaan ku siin doonaa dhowr tilmaan oo kaa caawinaya inaad ka baxdo.
1. Aqoonso Dhegeystayaashaada
Kahor intaadan bilaabin xoqitaanka qalabka si aad u abuurto fiidiyowgaaga, waa inaad ogaatid cidda dhagaystayaasha kuugu horreeya. Haddii aadan aqoon cidda aad rabto in fiidiyowgu gaaro, way adkaan doontaa in la abuuro nuxur iyo xitaa ka sii xun, waxay ku dhammaan kartaa ururinta boodhka maaddaama uusan qofna rabin inuu daawado.
Waa muhiim in la ogaado cidda dhagaystayaashaadu tahay maxaa yeelay waxay noqon doonaan kuwa daawanaya fiidiyahaaga. Marka, baro iyaga - waxa ay jecel yihiin, waxa aysan jeclayn, waxa ay la halgamayaan, iyo sida aad xal ugu heli karto mashaakilkooda.
Waxaa laga yaabaa inay ku dhibtoonayeen sida loo isticmaalo badeecadaada ama adeeggaaga, sidaas darteed sameynta fiidiyow u sharxaya iyaga ku saabsan alaabtaada ama magacaaga ayaa noqon doona hab fiican oo lagu bilaabi karo.
2. Samee xoogaa cilmi baaris ah
Erayo-fureyaasha kaliya laguma qiimeyn karo Google. Waxay noqon karaan sida waxtar u leh hubinta in fiidiyowgaaga fiidiyoowgu arko sida ay ugu sarreeyaan matoorada raadinta. Markii aad qorto barta baaritaanka ee Youtube, waxaad ka heli doontaa sanduuq hoos loo dhigo oo ay ka buuxaan talooyin.
Soojeedimahan ayaa faa'iido u leh fiidiyahaaga maxaa yeelay waxay ku tusaysaa waxa raadinta caanka ahi yihiin. Markaad fikrad ka haysato ereyada muhiimka ah ee dadku raadinayaan, waxaad ku dhisi kartaa mawduucaaga ereyadaas isla markaana waxaad abuuri kartaa wax dadku rabaan inay arkaan.
Waad ku hagaajin kartaa SEO-ga fiidiyowga adoo adeegsanaya thumbnails, cinwaanno, iyo sharraxaad rafcaan u leh waxa ay dhagaystayaashaadu raadinayaan. Si fudud ugu adeegso ereyada muhiimka ah inta aad kari karto sanduuqa sharaxaadda ama cinwaanka.
3. Caawimo ka hel Qalabka Qaar
Internetka waxaa ka buuxa kheyraad fara badan. Dhibaato kasta, waxaa jira ixtimaal sare oo aad ku heli lahayd xalka Google.
Haddii aad raadineyso inaad abuurto fiidiyoow laakiin aadan aqoon sida, ha u oggolaan inay kaa joojiso inaad bilowdo. Fiidiyowyadu waxay umuuqdaan inay yihiin maalgashi aad u weyn waxayna umuuqan karaan wax aad ku faaneyso, laakiin aamin ama ha aaminin, waad heli kartaa qalab loogu talagalay abuurista fiidiyowyada kuwaas oo la awoodi karo ama xitaa bilaash ah.
Uma baahnid inaad ahaato khabiir ku xeel dheer suuqgeynta fiidiyowga si aad kaligaa u sameysato fiidiyoow. Xitaa haddii aad hadda bilowdo, waxaad ka heli kartaa qalab kala duwan khadka tooska ah.
Hadda waxaad haysataa fikrad qallafsan oo ah waxa aad u diyaar garoobeyso inaad ugu dambeyntii bilowdo ololeynta suuqgeynta fiidiyowga maanta. Marka, bilow liistada ereyadaas muhiimka ah isla markaana cadee cidda ay tahay dhagaystayaashaadu. Markaad labadaas kala saartid, waa waqtigii aad bilaabi lahayd sameynta fiidiyowyadaada.
Tags: Fiidiyowyada Suuqgeyntaistaraatiijiyada fiidiyowga
Sida Loogu guuleysto Macaamiisha